my kitchen my life: red snapper
Cartoccio di Dentice alla Ligure con Patate NovelleePomodorini al Basilico
Fillet of red snapper wrapped in baking paper with cherry tomatoes , olives , capers and potatoes and baked in the oven.
ပထမဆုံး ငါးကို ၊ သံပုရာရည် ၊ဆား နဲ့နယ် ဂျုံကပ် ဒယ်ထဲမှာ ကြော်။ အရောင်လေးနည်းနည်းရလာပြီဆိုရင် ခရမ်းချဉ်သီးဆော့ ထည့် ၊ cherry tomatoes , olives , capers ထည့်၊ stock ပါးပါးလေးထည့်။ ဆော့စ် ဆူလာပြီဆိုရင် အာလူးပြုတ်ကို နှစ်ခြမ်းလှီးပြီး baking paper ပေါ်တင် ၊ နောက် အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ ငါး နဲ့ ဆော့စ် ကိုတင် oven ထဲထည့်။ အရောင်လေး ရရင် အပြင်ကို ထုက် truffle oil လေးကို အပေါ်က ပေါက်ပေး။ Pick Up !!! ;P
Posted by leo mark at 6:05 PM